कृषिप्रधान देशमा कृषिजन्य बस्तुको आयात बढेको बढ्यै
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको चर्को अभावका बावजुद यो वर्ष धान उत्पादन बढेको तथ्यांक गत पुसमा सार्वजनिक गर्‍यो । तथ्यांक अनुसार, यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान फलेको थियो, जुन गत वर्षभन्दा ७० हजार ८३१ टन धेरै हो । मन्त्रालयका अनुसार, यो वर्ष फलेको धान अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
धान धेरै फल्दा विदेशबाट आयात हुने धान/चामलको परिमाण घट्नुपर्ने हो । तर, यसको उल्टो धान/चामलको आयात चुलिएको चुलियै छ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म रु. ३० अर्ब ७० करोड बराबरको धान/चामल आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६१ प्रतिशत धेरै हो । गत वर्षको माघ महीनासम्म रु. १९ अर्ब ५ करोडको मात्रै धान/चामल आयात भएको थियो ।
पछिल्ला हरेक वर्षमा धान चामलको आयात उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । त्यसको निरन्तरता यो वर्ष पनि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै रु. ३३ अर्ब ६५ करोड मूल्यको धान/चामल आयात भएको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, माघसम्म रु. १ खर्ब ७३ अर्ब बराबरको कृषि वस्तु आयात भएको छ । तर, कृषि वस्तुको निर्यात करीब रु. ३७ अर्बको मात्रै छ । विभागका अनुसार, रु. ४९ अर्बको अन्न, रु. २२ अर्ब ४० करोडको तरकारी, रु. १० अर्ब १५ करोडको फलफूल र काजु/बदाम आयात भएको छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्न नछोडिए पनि देशभित्र कृषि वस्तुको उत्पादन माग अनुसार हुन नसक्दा हरेक साल कृषि वस्तुको आयात बढ्दै आएको छ ।
<<< : आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढायो
संसद पुनर्स्थापना, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश : >>>
देशकै ठूलो सौर्य प्लान्ट सञ्चालन
दलितले छोएको खाएको निहुँमा बहिष्कृतलाई न्याय दिन आयोगको निर्देशन
रूग्ण उद्योगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अन्योल
माटोको डिजिटल नक्सा तयार, घरबाटै माटोको परीक्षण गर्न सकिने